Myanmar DCR | အမေး အဖြေ
အမေး အဖြေ ကဏ္ဍ
OJT Training တွေရှိပါသလား?
အလုပ်အများစုဟာ ဂျပန်လူမျိုး customer များ၏အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဂျပန်စာနားလည်ဖို့အရေးကြီးသည့်အပြင် IT Skill မြင့်မားရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ ထိုအရည်အချင်းများပြည့်စုံသော ဝန်ထမ်းများပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီအတွင်း သင်ကြားရေးအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်သည့်အချိန်မှစပြီး များစွာသော ထူးချွန်သည့်မြန်မာလူမျိုး IT ပညာရှင်များ မွေးထုတ်လာသောကြောင့် Myanmar DCR ကုမ္ပဏီမှာ မြင့်မားသော Know-How ရှိပါသည်။ အလုပ်မဝင်ခင်အချိန်မှစပြီး ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းများသို့ သွားရောက်သင်ကြားစေပြီး အလုပ်ဝင်ပြီးသည့် အချိန်အထိ ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ N1အဆင့်အောင်မြင်နိုင်ရန် ကုမ္ပဏီမှအကုန်အကျခံသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ IT နှင့်ပတ်သက်၍လည်း အမျိုးမျိုးသော programming ဘာသာရပ်များ၊ Databaseများ၊Business Knowledge များကို Seminar များပြုလုပ်ပြီး သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ရာ ထူးချွန်သော ဂျပန်လူမျိုး Manager များထံမှ ဂျပန်နိုင်ငံ၏နည်းပညာများကို တိုက်ရိုက်သင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံသင်ကြားမှုပြီးစီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် သက်ဆိုင်သည့် OJT(On Job Training) များပြုလုပ်စေမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများ Skill Up ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
ဝန်ထမ်းအားလုံး လစာခံစားခွင့်တသမတ်တည်းဖြစ်သော ကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လစာပေးသောစနစ်သည် စွမ်းရည်ပေါ်မူတည်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ လုပ်သက်နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲ ကျွမ်းကျင်ပြီးထူးချွန်သော ဝန်ထမ်းသည် လစာခံစားခွင့် မြင့်မားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လုပ်သက်၂နှစ်နှင့်လည်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော လူများလည်းရှိပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် IT စွမ်းရည်တခုတည်းမဟုတ်ပဲ ဂျပန်စာအရည်အချင်း၊ Project Management စွမ်းရည်၊ Communication စွမ်းရည်၊ အမျိုးမျိုးသော စွမ်းရည်ပေါ်မူတည်ပြီး လစာခံစားခွင့်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းရည်ကို လိုက်ပြီး လစာခံစားခွင့် ကွာဟမှု မြင့်မားပါသည်။
ယခုလက်ရှိ (၂၀၁၉ခုနစ် ဧပြီလအထိ) နည်းပညာရှင် ၈ဝဦးကို ဂျပန်နိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ စေလွှတ်လုပ်ကိုင်စေပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်တွင် လက်ရှိသုံးနှစ်ကျော် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းများလည်းရှိသလို၊ Project အလိုက် ဂျပန်နှင့်မြန်မာ အသွားအပြန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ဝန်ထမ်းများလည်း ရှိပါသည်။ ဂျပန်သို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန် ဂျပန်စာအရည်အချင်း N2 အဆင့်အောင်မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော IT အရည်အချင်းများလည်း ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအားလုံးတွင် အခွင့်အရေးရှိပြီး ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိရန် လိုပါသည်။
ဂျပန်သို့စေလွှတ်လုပ်ကိုင်စေသော အခြားကုမ္ပဏီများလည်း ရှိသော်လည်း ထိုကုမ္ပဏီများသည် ဂျပန်ကိုစေလွှတ်ရုံသာ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လစာမြင့်မားစွာရရှိသည်ဆိုသော်လည်း မြန်မာများနှင့် ဆက်ဆံရေးမပြုလုပ်ပဲ ဂျပန်လူမျိုးများမပြုလုပ်ချင်သော အလုပ်များကိုသာပြုလုပ်ရခြင်းမျိုးရှိပါသည်။ ကျွနၲုပၲတို့ ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဂျပန်များနှင့်တန်းတူ အလုပ်လုပ်ကိုင်စေပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိပါ။ စွမ်းရည်အလိုက် ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်တန်းတူ မြင့်မားသောရာထူးများလုပ်ကိုင်နိုင်သော အခွင့်အရေး များလည်းရှိပါသည်။ ဂျပန်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်း မြန်မာဘက်နှင့် အဆက်အသွယ်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ပြီး MDCRဝန်ထမ်းအဖြစ်လည်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသည့်အချိန် တွင်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံမှရရှိခဲ့သောစွမ်းရည်ဖြင့် Leader၊ Managerအဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
စီနီယာဝန်ထမ်းများသည်လည်း အတွေ့အကြုံမရှိသော အခြေအနေများမှစပြီး ဝန်ထမ်းဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်း သုညအခြေအနေရှိသော ဝန်ထမ်းများလုံးဝစိတ်ပူရန်မလိုပါ။ ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ အခြေအနေမှာ အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောသင်ကြားရေး အစီအစဉ်များရှိပြီး အလုပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပါက Skill Up လုပ်ရာတွင်လည်း အခက်အခဲရှိမည်မဟုတ်ဘဲ နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ထူးချွန်သောITပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာရစေမည်မှာ မလွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ Career Path ရောက်အောင် ကုမ္ပဏီကထောက်ပံ့ပေးပါသလား?
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်သက်၊ ကျွမ်းကျင်ရာနယ်ပယ်နှင့် ဆန္ဒအလိုက် ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ Career Path ကိုဖန်တီးပေးပြီး ယင်းရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်ပြီး အောင်မြင်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။ သို့သော် စွမ်းရည်ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ ထောက်ပံ့ပေးရခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိမိကဆုပ်ကိုင်ထားသောအရာမျိုးသာဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏စွမ်းရည် တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိသောသူမှသာ ကုမ္ပဏီမှ အပြည့်အဝထောက်ပံ့ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွနၲုပၲတို့ကလည်း ထိုသို့သောလူမျိုးကို ရှာဖွေနေပါသည်။
ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ ဂျပန်ITလုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်များကို ဖော်ပြလိုသည်ဟူသော ပြင်းထန်သည့်ဆန္ဒရှိလျှင် လုံလောက်ပါသည်။ အကြံဉာဏ်ပေးရမည်ဆိုပါက အလုပ်ဝင်ပြီး ၁နှစ်နောက်ပိုင်း၊ ၃နှစ်နောက်ပိုင်း၊ ၁ဝနှစ်နောက်ပိုင်း မိမိ၏အနာဂတ်အတွက် ပန်းတိုင်များကိုချမှတ်ထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထိုပန်းတိုင်များကို ဦးတည်ပြီး ယခုမည်သို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမည်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုဦးတည်ချက်များကို လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ခင်သာမက လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီးနောက်တွင်လည်း မိမိဦးတည်ချက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အိမ်မက်များအကောင်အထည် ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးတလည် လေ့လာထားရန်မလိုအပ်ပါ။ အလုပ်ဝင်စာမေးပွဲသည် ကျောင်းစာမေးပွဲများနှင့်ကွာခြားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ သင်တို့၏အရည်အချင်းကို တိုင်းတာလိုပြီး ITနှင့်ဆက်စပ်သော ဉာဏ်ရှိမရှိ၊ ဂျပန်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်အရည်အချင်းအရှိအတိုင်းကို ထုတ်ဖော်ပြရုံဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။